Imito-Fandriana: Itrangana fanafihan-dahalo izao alina izao
mardi, 11 février 2020 21:15
Antsoantso vonjeo anaty haizina, lakolosim-piangonana miraondraona, Fokonolona mikotaba sy mitsoka anjombona. Izay no mitranga ao amin’ny tapany avaratra amin’ny Kaominina Imito, Distrikan’i Fandriana, Faritra Amorin’i Mania izao alina izao.
Nitrangana fanafihan-dahalo miaro halatr’omby tao amin’ny Fokontany atao hoe : Ivolo, somary avatry ny renivohitry ny Kaominina. Nanao mandatehezana ny Fokonolona nanaradia sy nanakana ireo lalana rehetra mivoaka ny Kaominina.
Nahitam-bokany izany, ka dia tratra tokony ho tamin’ny valo ora sy sasany alina teo ny iray tamin’ireo dahalo fa tafatsoaka ny sasany ary tafaverina ny omby, hoy ny loharanom-baovao avy any an-toerana.
Marihina fa misy « Poste Avancé » ny Zandarimaria ao Imito, misahana Kaominina roa ny zandary ao, dia ny Kaominina Sandradahy sy Imito. Nanezaka avy hatrany tamin’ny moto, niaraka amin’ny Ben’ny tanàna ao an-toerana, namonjy ilay toerana ny zandary vao nahazo fampandrenesana.
Tranga fanafihan-dahalo fanin’efany niseho tao anatin’ny Kaominina Imito, tato anatin’ny roa herinandro teo izao ity androany ity. Halatr’omby ny roa, niseho tao amin’ny Amboasary sy Ambalafeno. Tafaverina ny omby tamin’itsy voalohany ary nisy dahalo iray voasambotry ny Fokonolona, ary maty niharan’ny fitsaram-bahoaka ; very kosa ny omby telo tao amin’ilay tanàna faharoa.
Nitrangana fanafihana fiara nitondra mpivarotra avy eny an-tsenan’ny Kaominina Mahazoarivo, Distrikan’i Fandriana ihany koa tamin’ny tolakandron’ny talata 4 febroary heriny androany, nitranga tao amin’ny toerana atao ho Ilohafosa ka nahaverezana vola aman-tapitrisany.